Ciidanka dowladda oo la wareegay deegaano hoos yimaada degmada Ceelbuur | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Ciidanka dowladda oo la wareegay deegaano hoos yimaada degmada Ceelbuur
Ciidanka dowladda oo la wareegay deegaano hoos yimaada degmada Ceelbuur
Ciidanka Xoogga dalka oo ay wehliyaan kuwa Nabadsugida ayaa howlgal qorsheysan ku gaaray deegaanka War-xoolo oo hoostagta degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud oo ka mid ah deeegaanada Al-Shabaab maamulaan.
Deegaanada Ceel-god iyo warar-dhuuma ee hoos-taga degmada Cellbuur ayay ciidanku gaareyn.
wararka ayaa sheegaya dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa isaga baxay deegaanka, kaddib markii ay ka war heleen inay Ciidamada ku soo wajahan yihiin, waxaana ay u baxeen dhanka deegaanka Wabxo oo dhowr iyo toban KMG u jirta.
Taliyaha Guutada 15aad ee Qaybta 21aad Jen. Mascuud Maxamed Warsame ayaa hoggaaminayay Ciidamada, waxaana ay meel fagaare ah kula hadleen dadka deegaan, waxaana dadka deegaanka u balan-qaadeen inay wixii hada ka dambeeya Al-Shabaab ka xoreyn doonaan, si culeyska iyo cadaadiska saaran uga dulqaadaan.
Ciidamada ayaa sidoo kale gaaray deegaankada Ceel-god iyo warar-dhuuma, halkaasoo dadka deegaanka ku soo dhoweeyeen.
Lama oga in howlgalkan uu yahay mid qorshihiisa yahay qabashada degmada Ceelbuur oo Al-Shabaab muddo sanado ah gacanta ku hayaan, waxaana horay u jiray in Maamulka Galmudug balan-qaaday in Al-Shabaab ka saari doonaan degmada Ceelbuur iyo deegaanada kale ee Gobolka Galgaduud.